12 Anoshanda eMicrosoft Word Matipi uye Tricks - WebSetNet
6 Min Verenga
Mikana ndeyekuti, iwe unogona kushandisa Microsoft Word izvozvi, kana ungatofanira kuishandisa mune ramangwana. Zviri nyore inonyanya kufarirwa izwi processor ye Windows, saka kudzidza matipi anobatsira eMicrosoft Word kutora mukana zvinogona kubatsira kunatsiridza kugadzirwa kwako nekukurumidza basa rako.
Pasinei nokuti iwe uri mutsva kuMicrosoft Word kana wave uchishandisa kwemakore, tinotarisira kuti zvimwe humwe mazano ataurwa pasi apa achakubatsira iwe.
Bata Pasina Kuchinja
Kana uchida kukopa chimwe chinhu kubva kune imwe nzvimbo asi usingadi kuti faira ichinje kubva pane zvauri kushandisa ikozvino muShoko rako reShoko, kopize sezvinowanzoitika, asi press Ctrl + Shift + V. Kuita izvi kuchaita kuti zvinyorwa zvive zvakapfurikidza asi chero kuumbwa, zvakadai sevaravara, ruvara, uye faira, hazvingaverengwi.
Kana iwe uchida kubvisa kuumbwa kwechimwe chikamu chebhuku rako, zvinongoda kusimbisa iyo nzvimbo Uye chengetedza Sora Kufambisa icon. Chiratidzo chinenge chichitarisa sekachera kadiki pedo netsamba A.
Kana iwe uchida kubvisa mafomatiro pane zvose zviri mumagwaro ako, chura Ctrl + A kuti uise pachena zvinhu zvose zviri mumagwaro acho uye wozonyora zvakajeka kuumba mafaira.
Simbisa nzvimbo yeMagwaro nokukurumidza
Panzvimbo pokutsvaira nekukwevera kuti uise pachena nzvimbo yekunyora muMicrosoft Word, iwe unogona tora kamwe chete kuti uise mutsara wekunyora pakutanga kwenzvimbo yaunoda kuisa pachena, kubata, ipapo pinda pamucheto weharaunda waungada kuisa pachena.
Kurumidza Kuchinja Zvikanganiso Zvakawanda
Wangobva wapedza rugwaro rurefu uye wangoona kuti iwe wakaita chikanganiso chiduku chemashoko, somuenzaniso, kunyora pasi mark, panzvimbo pekucherechedza? Iwe unogona kugadzirisa izvi mukati memasekondi mashomanana nekushandisa kuwana uye kuchinja.
Kutanga, shandisa Ctrl + F uye iyo yekuwana uye yekushandura chigadzirwa ichazarura. Zvadaro, tora Dzorera, ipapo faira muzwi kana mutsara waunoda kutora. Pashure, nyora zvinhu zviri mukati zvaunoda kuti zvishandiswe.
Kurumidza Kukopa uye Dhinda Lists
Ngatiti iwe unofanirwa kupfuura nepurogiramu uye sarudza mamwe mashoko / mitsara uye unyore urongwa kubva kwavari.
Panzvimbo pokudzoka shure nekunze, kunyora chimwe nechimwe chinhu chiri pazorongwa pose paunoona shoko, iwe unogona kungoita kusimbisa shoko rimwe nerimwe uye tigoshingairira CTRL + F3. Iwe unogona kuita izvi kakawanda kusvikira wawana shoko rimwe nerimwe / mutsara.
Kana wati wapedza, enda kunzvimbo iri mumagwaro iwe unoda kuti urongwa hugadzirwe nekudhinda Ctrl + SHIFT + F3 ku nyora dzose dzezvinhu zvakasimbiswa zvawakangonyora. Ichi chinhu chinozivikanwa se Spike muShoko.
Sekuita danho rekupedzisira, unogona kuisa pachena zviri mukati uye kushandisa zvishandiso kana nhamba dzekuverenga mubhairi rekushandisa kushandura mazwi / mitsara mune imwe yakanyorwa yakanyorwa.
Bvisa Toolbar Ribbon
Kana iwe uchida kunyora kusina kukanganisa, iwe unogona kubvisa bharibhoni yemabhadhi iyo inogara pamusoro pebhuku rako nekudhinda Ctrl + F1. Kana uchida kudzoka pane chero ipi zvayo, unogona kudhinda Ctrl + F1 zvakare kuti udzose zvakare.
Sora Mashoko Neye Key Key Press
Unoda kubvisa chikuru chunk chemavara? Pane kubata pasi backspace bar, iwe unogona pane kubata Ctrl uye pfuurira BACKSPACE.
Kuita izvi kuchabvisa shoko rimwe chete nguva dzose paunenge uchinyora bhodhi rekusevera, panzvimbo yemunhu mumwe chete unhu. Tora pasi bhokisi rekudzokera shure uye ctrl bhatani pamwe chete kuti udzike zvinyorwa zvemashoko pavhenekeri.
Shandisai 'Ndiudzei Zvaunoda Kuita'
Kana uri kuedza kutsvaga basa paMicrosoft Word asi uri kutambura kufamba nema menus kana kuti haugoni kurangarira nzira shoma, tora 'Ndiudzei kuti ndinoitei' shortcut yepamusoro pebharibhoni yebhoni.
Kubva pano, unogona kunyora pane zvaunoda kuita uye iwe uchawana mhinduro dzepfungwa kuti udzibatsire. Somuenzaniso, kuisa 'denga tafura ' ichakupa dzimwe nzira dzekugadzira tafura kubva mukati meDhidziso yako.
Ichi chishandiso chinhu icho vazhinji vashandi vekare veShoko vekuchikoro vangave vasingazivi kuti chiripo, asi zvinoshamisa zvikuru.
Kurumidza Kuona Shoko
Kana uri kugadziridza chigwaro cheShoko asi unoda mamiriro ezvinhu, unogona kushandisa Smart Lookup. Simply kusimbisa shoko, kurudyi uye baya Smart Find.
Kuita izvi kuchazarura boka duku rine mashoko ane chokuita neshoko. Iyo inochengetedza kuenda kune yako browser uye ichiita tsvakurudzo, asi yakasimba sekuita saizvozvo.
Deredza Shanduro uye Grammar Check
Kutanga, ruzivo rwakajairika kuti unogona kuvhara shoko neshoko repelenzi uye chengeta 'Wedzera kuDuramazwi'. Izvi zvinobatsira kana uri kushandisa zvinyorwa zvishoma kana mazwi ezvinyorwa. Iwe unogonawo kubvisa spelling uye grammar chengetedza zvachose kubvisa iyo miviri yakajeka ine tsvuku uye yakasvibirira.
Kugadzirisa kupereta uye gwaro rekuongorora muShoko kune rimwe bhuku, tsvaga faira, ipapo Options, ipapo chengeta Uchapupu. Iwe unofanirwa kuisa zvinyorwa zviviri kuviga spelling uye maitiro emitauro mune gwaro rauri kunyora panguva ino.
Gadzira Wako AutoCorrect Settings
Iva nemamwe mazwi ausingakwanisi kududzira zvakanaka? Kana, pane marefu mashoko kana mazwi anonyora iwe kakawanda? Iwe unogona kushandisa tsika AutoCorrect settings kuitira kuti upenyu hwako huve nyore kwazvo.
Simply click faira, ipapo Options, ipapo chengeta Uchapupu. Mushure maizvozvo, tora AutoCorrect Options. Iwe unogona kuwedzera yako tsika tsika uye zvakare kururamisa iwe unoda kuti ichinatsiviwa ne. Nharaunda AutoCorrect ingava nzira yakanakisisa yekuwedzera yako zvibereko.
Kwete chete iwe unogona kuishandisa kuti uchinje chero hupi zvayo unowanikwa pachepenzi kukanganisa, asi iwe unogona kuishandura kuti ushandure zvinyorwa zvishomanana mumashoko marefu kana mazwi kuti uchengete nguva.
Shandura Peji Yechipfuva Chekuona Zvakanaka
Yakava yehutsika yehupenyu hwehuwandu hwemagwaro kuti uve mutsvuku wakajeka. Pane dzimwe nguva, izvi zvinogona kuva zvakanyanya kuoma pameso ako. Kuti uchinje peji yepavara kune sepia, iyo ine mhete yakasvibira, tsvaira pa 'ndiudze kuti ndiitei' bhokisi, zvino taura 'change page color'.
Muchigumisiro, tora Page pevara uye iwe unenge uine dzimwe nzira dzaunogona kusarudza kubva, kusanganisira Sepia, iyo iri nyore nyore pameso.
Waiziva here mazano eMicrosoft Word atakataurwa munyaya ino? Kana zvisina kudaro, iwe unofunga kuti ndeipi inonyanya kukosha kwauri? Rega ndive kuziva, uye ndinzwe wakasununguka kugovera mazano ako eMicrosoft Word mumashoko ari pasi apa. Enjoy!
The post 12 Inobatsira Microsoft Word Mazano uye Tricks yakatanga kutanga Online Tech Tips.
Maitiro Ekuwedzera nekushandisa Tsika Dictionaries muMicrosoft Word
Mashandisiro Ekushandisa Photoshop: Iyo Inotaridzika Photoshop Dzidziso yeVatangi
Maitiro Ekugadzira uye Ita matafura muMicrosoft Word
Sei Kudhinda Office Office Gwaro Background Ruvara
Maitiro ekuita tafura yezvinhu muIzwi
Iyo 7 Yakanyanya kunaka Microsoft Word Wedzera-Ins